Vaovao - Inona avy ireo fitaovana azo zezika?
Ny fahasimban'ny compostable dia ny fetran'ny biodegradation, ny fanondroana ny tontolo mikraoba, ny fotoana fanimbana, ny fenitra ary ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana. Ny Vondrona eropeana dia manana famaritana momba an'io, izay faritana ho "fitaovana azo zezika". Araka ny EN13432, ny akora azo zezika dia tsy maintsy mampiseho ny toetra mampiavaka ny biodegradability, izany hoe ny fahafahan'ny akora fanaovana zezika hamadika ho CO2 ambanin'ny asan'ny zavamiaina bitika. Ity fananana ity dia norefesina tamin'ny alàlan'ny fomba fitsapana mahazatra momba ny laboratoara: en14046 (nambara ihany koa ho iso14855: biodegradability amin'ny fepetra composting voafehy). Mba hampisehoana ny biodegradability tanteraka, 90% farafaharatsiny amin'ny haavon'ny biodegradation dia tsy maintsy tratra ao anatin'ny 6 volana.
Mamoaka fitsipika momba ny fitaovana simba azo zezika ny EU
Ny fanaparitahana izay refesina amin'ny andrana compost mpanamory fiaramanidina (en14045), izany hoe ny fanaparitahana sy ny fahaverezan'ny fahitana (tsy misy fandotoana hita maso) ao amin'ny zezika farany. Ny santionan'ny fitaovana fitsapana dia namboarina tamin'ny fako biolojika nandritra ny 3 volana. Ny zezika farany dia voasivana amin'ny sivana 2 mm. Ny habetsaky ny sisa tavela amin'ny fitaovana fanandramana misy habe> 2mm dia latsaky ny 10% -n'ny lamina voalohany.
Dingana fanodinana ireo fitaovana azo zezika
Tsy nisy fiatraikany ratsy tamin'ny fizotry ny zezika, izay voamarina tamin'ny alàlan'ny fitsapana ny composting. Ambaratonga ambany amin'ny metaly mavesatra (ambany farafahakeliny nomena) ary tsy misy fiatraikany ratsy amin'ny famonoana farany (izany hoe ny fihenan'ny sanda agronomika sy ny fisian'ny vokatra ekotoxicolojika amin'ny fitomboan'ny zavamaniry). Ny fitsapana ny fitomboan'ny zavamaniry (oecd208 novaina) sy ny fizika fizikokimika hafa dia nampiharina tamin'ny composting izay nisehoan'ny fahasimban'ny fitaovam-panandramana.
Ny vokatray dia 100 biodegradable sy compostable avokoa, izay nankatoavina EN13432, ASTM D6400, BPI, FDA.
Kitapo fako azo zezika, Eco Cling Wrap Sugar Wrap, Kitapo fako tsy azo ovaina, Sarimihetsika mihinjitra biodegradable, Famonosana clod biodegradable, Kitapo azo zezika,